Airbus inoshandura yayo yeEuropean set-up mune aerostructures
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Airbus inoshandura yayo yeEuropean set-up mune aerostructures
avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Spain Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Airbus inopa rumwe ruzivo nezve iyo inoenderera mberi nekambani kuongororwa kwayo kwemaindasitiri kuEurope
Airbus inoronga kugadzira makambani matsva emagetsi muFrance neGerman
Nhaurirano dzinoenderera mberi maererano neyakagadziriswa maindasitiri kuSpain
Airbus yasimbisazve chinangwa chayo kuvaka yakasimba aerostructures musangano kukosha ketani kuyambuka kwayo kwemaindasitiri system
Airbus yakapa rumwe ruzivo kune avo vayakabatana navo panguva yemusangano weEuropean Works Council (SE-WC) nezve kuenderera mberi kweKambani kweyakagadziriswa maindasitiri muEurope, kunyanya zvine chekuita neaerostructures zviitiko muFrance neGerman.
Airbus yakasimbisazve chinangwa chayo chekuvaka yakasimba aerostructures musangano kukosha ketani kuyambuka kwayo kwemaindasitiri sisitimu kune avo vehukama vanobatana navo, uye inofunga eerostructures gungano seyakadzika kubhizimusi rayo. Airbus yakaratidza hurongwa hwayo hwekugadzira makambani maviri akabatanidzwa eerostructures musangano pamwoyo weindasitiri sisitimu kuitira kuti isimbise kukosha kwayo kwerwizi manejimendi uye kugadzirira iyo Kambani yenguva yayo pfupi- uye yakareba-ramangwana.
Sechikamu chezvirongwa izvi, uye pakuzadzikiswa kwekuenderera kwehurongwa hwehukama, iyo kambani nyowani muFrance yaizounza pamwe zviitwa parizvino zviri kutarisirwa mukati meAirbus muSaint-Nazaire neNantes pamwe neiyo ye STELIA Aerospace pasi rese. Imwe kambani kuGerman yaizounza zviitiko zveStade uye Structure Assembly yeHamburg pamwe neyaPrimiyamu AEROTEC muNordenham, Bremen uye imwe chikamu muAugsburg, ichizoenzanisazve zviitiko kumusoro kwechikamu chekoshi uye kuongorora kubatanidzwa kwayo mukugadzirwa kwemashoko. zvikamu.
Aya makambani maviri matsva emakambani emagetsi, ese ari maviri eAirbus, haachave vatengesi kuAirbus asi anozove akabatanidzwa mukati meiyo Airbus mukombero, zvichirerutsa hutongi nematanho mugadziriro nyowani yeindasitiri. Chimiro chavo chakasarudzika chaizovabatsirawo kuti vatarise pachikamu chavo cheindasitiri uye vave vakaomarara uye vanononoka, kusimudzira kukwikwidza, hunyanzvi uye hunhu kuti zvibatsire zvirongwa zveAirbus yanhasi uye mangwana.
Airbus inotarisirawo kugadzira mutambi mutsva wepasirese muzvikamu zvebhizinesi, zvakamisikidzwa kuGerman. Akazvarwa kubva nhasi Premium AEROTEC, ichi chitsva chikamu, nehuremu hwayo uye hunyanzvi hwetekinoroji, ichapihwa simba rekushandisa pane yakakosha tarisiro yekukura kwenguva refu neAirbus pamwe nevatengi vekunze, pane ese ehurumende neemauto mapuratifomu.
MuSpain, Airbus iri kuenderera mberi nekugadzirisa mhinduro pamwe neyavanoshamwaridzana navo kuti vagadzirise maindasitiri uye maaerostructures akagadzwa munzvimbo yeCadiz kuitira kuona kushanda kwayo, kusimba uye kukwikwidzana kweramangwana.